အကြင်နာနန်းတော်: တရားမင်းသခင် - ၂၆။ ဘ၀အမြင်
တရားမင်းသခင် - ၂၆။ ဘ၀အမြင်
ဘုရားရှင်သည် တဲအိမ်ငယ် တစ်လုံးရှေ့၌ မျက်လွှာချ၍ သပိတ်ပိုက်လျက် ရပ်တော်မူနေ၏။ အပေါ်ဝတ် မပါသော စဏ္ဍာလ အမျိုးသမီးငယ်လေး တစ်ဦးသည် ဘုရားရှင်၏ ထံတော်ပါးသို့ ရောက်လာ၏။ ကလေးငယ်သည် အချိုထည့်ထားသည့် ပဲနောက်စိမ်းပြုပ် သုံးဆုပ်ကို ဘုရားရှင်၏ သပိတ်ထဲသို့ လောင်းလှူလိုက်ပြီး ဘုရားရှင်ကို လက်အုပ်ချီနေ၏။
နှင်းလွှာနှင်းချပ်တို့ကို ဖြတ်ကျော်နင်းလျှောက်လာသူ သုဒ္ဓေါဒန မင်းကြီးသည် ဘုရားရှင်၏ အနီး၌ ရပ်လိုက်၏။ မင်းကြီး ငိုနေသည်။ ဒေါသကြောင့် တုန်တုန်ခိုက်ခိုက် ဖြစ်နေသည်။ ရှိုက်ကြီးတငင်နှင့် မျက်ရည်သုတ်ရင်း ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထား၏။
“သားတော်ဘုရား . . .။ ဘယ်လောက် မတော်မတရားနိုင်လိုက်ပါသလဲ . . .။ အခုလို . . . ဇာတ်နိမ့်တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်တံစက်မြိတ်အောက်မှာ သားတော်ဘုရားကို လက်ခံတွေ့ဆုံ ကြိုဆိုရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ အိုကြီးအိုမ ခမည်းတော်ကြီးကို ဘာဖြစ်လို့ နှိပ်စက်စော်ကားရတာလဲ သားတော်ဘုရား . . .။ ခမည်းတော်တို့ဟာ သုဒ္ဒတွေဆီကဆိုရင် ရေတစ်ပေါက်တောင် သောက်တာ မဟုတ်ဘူး . . .။ ဒီကြားထဲ . . . သားတော်ဘုရားက ဘာဖြစ်လို့ ဒီ အိမ်တံစက်မြိတ်မှာ မလပ်ဆတ်တဲ့ ပဲနောက်စိမ်းတွေ လာတောင်းနေရတာလဲ။ ခမည်းတော်ကို အရှက်မခွဲပါနဲ့ သားတော်ဘုရား . . .။ မြင့်မြတ်တဲ့ သာကီမင်းဆက် အသရေပျက်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ . . .။”
“ခမည်းတော် . . . ခမည်းတော်ကိုရော ခမည်းတော်ရဲ့ သာကီမင်းဆက်ကိုပါ မစော်ကားပါဘူး။”
“သားတော်ဘုရား . . . သုဒ္ဒတွေဟာ ခမည်းတော်တို့ရဲ့ ကျွန်တွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အိမ်တံစက်မြိတ်မှာ သူတို့ဆီကနေ တောင်းစားတာဟာ အသရေ မယုတ်ဘူးလား။”
“မင်းကြီး . . .။ တောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလှူခံတာပါ။ အရိယာတို့ရဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းမှုက ဒီလိုပါပဲ။ သားတော်ရဲ့ အစဉ်အဆက်ဟာ သာကီမင်းဆက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓနိုင်ငံတော် တရားမင်းဆက်ပါ။ ဘုရားအဆူဆူနဲ့ ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ တပည့်သားသံဃာ အစဉ်အဆက်ဟာ ဒီလိုပဲ ဆွမ်းခံပါတယ်။ ဒါဟာ အရိယပရိယေသနပါ။ မြင့်မြတ်တဲ့ ၀မ်းရေးရှာနည်းပါ။ ဘုရားရှင်တို့ဟာ အဆင့်မခွဲပါဘူး။ ဇာတ်မစွဲပါဘူး။ ပဋိသန္ဓေကို အကြောင်းပြုပြီး အနိမ်အမြင့် မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဒါကို ခမည်းတော် နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင် တောင်းတယ်လို့ ခေါ်ချင်ခေါ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခမည်းတော် . . . ခမည်းတော်တို့ အခွန်အတုပ် စည်းကြပ်တောင်းခံကြတာနဲ့တော့ မတူဘူး။ ဘယ်လို တောင်းခံမှုမျိုးနဲ့မှလည်း မတူဘူး။ နှုတ်က ဘာမှ မပြောဘဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရပ်နေလိုက်တာပါ။ ပေးသူက ကြည်ဖြူလို့ ပေးတာကိုပဲ လက်ခံတာပါ။ ပေးရမယ်လို့ အတင်းအကြပ် မတောင်းဆိုပါဘူး။ မပေးရင် ဒဏ်ခတ်မယ်လို့လည်း မခြိမ်းခြောက်ပါဘူး။ မပေးချင်ရင် ငြင်းနိုင်ပါတယ် ခမည်းတော် . . .။”
“သားတော်ဘုရား . . . ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတောင်းထားတဲ့ဟာတွေကို စွန့်ပစ်လိုက်ပါ . . .။ ပွဲတော်စာတွေ ခံယူဖို့ သားတော်ရဲ့ တပည့်သံဃာတွေနဲ့အတူ နန်းတော်ကို ကြွပါ။”
“ခမည်းတော် . . . သားတော်ဟာ ခုနစ်နှစ်လုံးလုံး ဒီလိုပဲ ဆွမ်းခံခဲ့တာပါ။ မလတ်ဆတ်တာတွေ ကြမ်းရှတာတွေ စားသုံးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သားတော်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်စမ်းပါ။ မြင့်မြတ်တဲ့ ပွဲတော်စာတွေ စားသုံးထားတဲ့ ခမည်းတော်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး။ မွန်မြတ်တဲ့ ပွဲတော်စာတွေက ဇရာဒဏ်ကို ဘယ်လောက်ထိ အံတုနိုင်လို့လဲ။ ဒီ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အိုရမှာ သေရမှာ ဖြစ်နေပါရက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့် ခွဲခြားနေရတာလဲ။ ခမည်းတော် . . . သုဒ္ဒတွေကို အစွန့်ပယ်ခံအဖြစ် ဆက်ဆံတာဟာ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး။ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ ကူကယ်ရာမဲ့ ဖြစ်နေသူတွေကို နှိမ့်ချဆက်ဆံတာဟာ မှားပါတယ်။ သူတို့ကို ကူညီဖို့ သားတော်တို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဘ၀ တိုးတက်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလား။ ဒီမြေပေါ်မှာ ဒီလိုနိမ့်ကျသူတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ရေမြေ့ရှင် မင်းတစ်ပါးရဲ့ အသရေ ယုတ်မသွားဘူးလား။”
“သားတော်ဘုရား . . . သူတို့ဟာ အတိတ်ဘ၀က မကောင်းမှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့လို့ ဇာတ်နိမ့်အဖြစ်နဲ့ မွေးဖွားလာကြတာပဲ။ သူတို့ ကံကြွေး ဆပ်နေကြတာပဲ။ ဒါနဲ့များ . . . ခမည်းတော်တို့က သူတို့ကိစ္စနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။”
“ခမည်းတော် . . . အအုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူတွေထဲမှာ ဒီလို နိမ့်နိမ့်ကျကျ ဆင်းဆင်းရဲရဲတွေ ရှိနေတာကို အုပ်ချုပ်သူ မင်းတစ်ပါး အနေနဲ့ မရှက်မိဘူးလား။ ထားပါတော့ ခမည်းတော် . . .။ ခမည်းတော် ကံတရားအပေါ် ယုံကြည်နိုင်တာ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ အကုသိုလ်ကံကြောင့် သုဒ္ဒဖြစ်ကြရတယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဘယ်အမျိုးဇာတ်မှာ မွေးဖွားကြရမလဲ။”
“သားတော်ဘုရား . . . သူတို့ကျတော့ ခတ္တိယဇာတ် နဲ့ ဗြဟ္မဏဇာတ်မှာ မွေးဖွားကြရတာပေါ့။”
“ခတ္တိယဇာတ် နဲ့ ဗြဟ္မဏဇာတ်မှာ မွေးဖွားကြသူတွေ အိုကြ နာကြ သေကြရတယ် မဟုတ်လား။”
“အိုကြ နာကြ သေကြရတာပေါ့။”
“ခမည်းတော် . . . သူတို့ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ခံစားကြတဲ့ နေရာမှာ တူညီကြသလား။”
“မတူကြဘူး . . .။”
“ခတ္တိယ နဲ့ ဗြဟ္မဏ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကလေးတွေ မွေးဖွားကြသလား။ ဆွံ့တဲ့ ကလေးတွေ၊ ကန်းတဲ့ ကလေးတွေ၊ နားထိုင်းတဲ့ ကလေးတွေ မွေးဖွားကြသလား။”
“မွေးဖွားကြတာပေါ့ သားတော်ဘုရား . . .။”
“ခမည်းတော် . . . ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို ကလေးတွေ မွေးဖွားကြရတာလဲ။”
“ဒါဆိုရင် ခတ္တိယတွေ ဗြဟ္မဏတွေလည်း မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကံကြွေး ရှိကြတာပဲပေါ့။
ခမည်းတော် . . . သူတော်စင်ကြီး မာတင်္ဂအကြောင်း ကြားဖူးတယ်ဆိုရင် အဲဒီ သူတော်စင်ကြီး ဘယ်အမျိုးဇာတ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်မလား။”
“သားတော်ဘုရား . . . အဲဒီ သူတော်စင်ကြီးဟာ သုဒ္ဒပါ။”
“အဲဒီ သူတော်စင်ကြီးဟာ ခတ္တိယတွေ ဗြဟ္မဏတွေ ရှိခိုးပူဇော်တာ ခံရတယ် ဆိုတာကို ခမည်းတော် ကြားဖူးလား။”
“ကြားဖူးပါတယ် သားတော်ဘုရား . . .။”
“ဒါဆိုရင် . . . သုဒ္ဒဇာတ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူတွေဟာ ခတ္တိယတွေ ဗြဟ္မဏတွေရဲ့ ရှိခိုးပူဇော်မှုကို ခံယူနိုင်တယ် ဆိုတာကို ခမည်းတော် လက်ခံနိုင်မလား။ သူတို့လည်း ဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေ မဖြစ်နိုင်ကြဘူးလား။”
အအေးဒဏ်ကြောင့် ခိုက်ခိုက်တုန်နေသည့် မင်းကြီးသည် အချိန်ယူ စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ ချက်ချင်းပင် ပြန်လည်လျှောက်ထား၏။
“သားတော်ဘုရား . . .။ ခမည်းတော် နားလည်ပါပြီ။ သားတော် ဆိုလိုတာကို ခမည်းတော် သဘောပေါက်ပါပြီ . . .။ သဘောလည်း ကျပါတယ်။ နှစ်သက်ပါတယ်။ ခမည်းတော် နားလည်မှု လွဲခဲ့တာပါ။ မှောက်ထားတာကို လှန်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ ဖုံးထားတာကို ဖွင့်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ အမြင်ရှင်းပါပြီ . . .။
သားတော်ဘုရား . . . သားတော်ရဲ့ မိထွေးတော်ကြီးရော၊ ယသောဓရာနဲ့ ရာဟုလာလေးတို့ကပါ သားတော်ဘုရားကို တွေ့ရဖို့ စိတ်စောနေကြပါတယ် . . .။ သားတော်ကို မတွေ့ကြရတာ ကြာပါပြီ။ သူတို့အားလုံး မျှော်နေကြပါပြီ။ တပည့်သား သံဃာတော်တွေနဲ့အတူ နန်းတော်ကိုသာ ကြွပါတော့ သားတော်ဘုရား . . .။”
ပို့စ်ရေးသားသူ Ashin Acara. ရက်စွဲ Sunday, July 29, 2012